ओठमा मुस्कान भएका समृद्ध जनता काँग्रेसको सपना हो- रामनाथ | Diyopost - ओझेलको खबर ओठमा मुस्कान भएका समृद्ध जनता काँग्रेसको सपना हो- रामनाथ | Diyopost - ओझेलको खबर
ओठमा मुस्कान भएका समृद्ध जनता काँग्रेसको सपना हो- रामनाथ
दियो पोस्ट शुक्रबार, फाल्गुण ०७, २०७२ | ५:५५:१३
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको हामी पूर्वसन्ध्यामा छौं । हाल नेपाली कांग्रेसलाई अत्यन्त ठूलो नोक्सानी भएको छ । पार्टीका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भएको आज ११ दिन भएको छ । कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा जुटिरहेको यो अवस्थामा श्रद्धेय सभापतिमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशनमा मैले केन्द्रीय सदस्यमा प्रत्यासी हुने विचार गरेको छु । नेपाली कांग्रेसको विपीद्वारा प्रतिपादित विचार र आदर्श आम नेपाली जनताको घरदैलोमा पुर्याउनुपर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ । बिपीले नेपाली जनताको अधिकार नेपाली जनताकै हातबाट लेखिनुपर्छ अथवा संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने विचार ००७ सालमा बिजारोपण गर्नुभएको थियो । आज सुशील कोइरालाकै हातबाट संविधान जारी भएको छ । उक्त संविधानलाई जनतासम्म पुर्याउने कुरा आसन्न १३औं महाधिवेशनले गर्ने कुरा ध्यानमा राख्दै मेरा श्रद्धेय सभापतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्नको लागि मैले उम्मेदवारी दिने विचार बोकेको छु । यसमानेमा कि कांग्रेसको विचार जनताको बीचमा जुझारु ढंगले बस्ती–बस्ती र गाउँ–गाउँमा लैजान सकिएन भने यसको उपादेयता नहुन सक्छ । यसर्थ त्यही लक्ष्य उद्देश्यका लागि र कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएको संविधानलाई जनताकै हातमा पुर्याएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने अभिभारालाई पूरा गर्न मैले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्ने विचार गरेको हुँ ।
भनेपछि संविधान लागू गर्न र बिपीको विचार जनताकोमा लैजान जनतासँग जोडिएको नेतृत्व चाहिन्छ, त्यो हैसियत म राख्छु भन्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै हो । किनभने म नेपाली कांग्रेसको चार पटकसम्म सभापति भइसकेको छु । अहिले जिल्ला अधिवेशनबाट केन्द्रीय निर्देशन र पार्टीको विधानबमोजिम मैले त्यो पद छाडेँ । म जनताको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मानिस हुँ र आफ्नो राजनीतिक जीवनमा त्यही अभ्यास गर्दै आइरहेको छु । जनताको लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेविचार बिपीले बिजारोपण गर्नुभएको थियो, उहाँको एउटा असल कार्यकर्ताको हैसियले मुलुकमा विद्यमान असजिलो परिस्थितिबाट यसलाई मुक्त गर्न र जनताको जीवनशैली सजिलो बनाउँदै अधिकार जनतासम्म पुर्याउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो । जनताको साथी जो बन्न सक्छ, विचार जसले घरदैलोसम्म पुर्याउन सक्छ, त्यही जनताको नेता हो, त्यसको लागि म योग्य छु भन्ने मेरो दावी हो ।
बिपीदेखि सुशीलसम्म आउँदा कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारभित्रै थियो । अहिल सुशीलको निधनपछि अब कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारबाट बाहिर जान खोजेको हो र ?
हामी यतिबेला शोकमा छौं । यो अवस्थामा पनि हाम्रो नेताहरु आपसमा छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ । कोइराला परिवारबाट नेतृत्व बाहिर जानुपर्छ वा जानुहुन्न भन्दा पनि मलाई के लागेको छ भने बिपीले प्रतिपादन गर्नुभएको विचार नेपाल र विश्वकै सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक छ । तर त्यो विचारलाई जुन ढंगले जनताको बीचमा पुर्याउनु पथ्र्यो त्यो सकिएको छैन भन्ने आम नेता र कार्यकर्ताहरुले महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले हामीले पाएको जुन अधिकार छ, त्यसलाई जनताको बीचमा लैजानको लागि जरुरी आम कार्यकर्ताको बीचमा जानु जरुरी छ, जनताको बीचमा जानु जरुरी छ । तर यो महाधिवेशनमा कोइराला परिवारभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व आउने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ, बिपीको आदर्श जसले बोकेर हिंड्छ, त्यो नै कोइरालाहरुको उत्तराधिकारी हो अथवा कोइरालाहरुले तयार बनाएको नेतृत्व हो भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
तर बिपीको आदर्शलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्व चुक्यो भन्ने कांग्रेसभित्रै गुनासो छ नि ?
यसमा म पनि केही हदसम्म सहमत छु । हामी चुकेकै छौं । समयले कोल्टो फेरेको छ । हामी २१औं शताब्दीमा आइपुगेका छौं, यो सन्दर्भमा हामी नयाँ युगको आवश्यकता अनुसार हिंड्न सकिरहेका छैनौं कि भन्ने भान सबैलाई हुन्छ । यसर्थ अहिले २१औं शताब्दीमा मुलुक एउटा ग्लोबलाइजेसनमा पुगेका छ, विश्व हत्केलामा आइपुगेको छ । यो सन्दर्भमा कांग्रेसलाई अझ बढी चलायमान बनाउनु आवश्यक छ अबको हाम्रो अभिभारा त्यही हो । जनताका छाप्रो छाप्रो झुपडी झुपडीमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोक्ने नेतृत्वहरुलाई यो महाधिवेशनले चयन गर्छ । म पनि यो महाधिवेशनको एक सहभागीको हिसाबले यो उद्देश्यलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्नेछु ।
कांग्रेसलाई युग सुहाउँदो र थप चलायमान बनाउन तपाईंसँग के छन् योजनाहरु ? यो भन्दा अगाडिको नेतृत्वभन्दा म यसकारण फरक गर्न सक्छु भन्ने केही योजना होलान् नि ?
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाली कांग्रेसको विचारलाई जनताको बीचमा लैजानुपर्छ खुल्ला छाती राखेर । हामीले पिठ्यू फर्काएर होइन । कांग्रेसको विचारलाई छाती खोलेर जनताको बीचमा लैजान हामी तयार हुनुपर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि नेतृत्व दिन सक्ने पार्टी कांग्रेस नै हो भन्ने कुरा जनतालाई हामीले बुझाउन सकेनौं । त्यो अब हामी गर्छौं । अहिले जनता बलियो भएको परिस्थिति पनि छ । यो परिस्थिति निर्माण गर्न कसले बढी योगदान दियो ? यो उत्तर हामी जनताको बीचमा पुर्याउने दायित्व हामीले लिन्छौं । यसको लागि यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वलाई त्यो म्याण्डेड दिन सकोस् र त्यो नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा जनतालाई प्रभावित गर्न सकोस् भन्ने मेरो अपेक्षा र विश्वास हो ।
शुक्रबार, फाल्गुण ०७, २०७२ | ५:५५:१३